Ihe Mere I Kwesịrị Inye Aka na Infographics Ozugbo | Martech Zone
Anyị gị n'ụlọnga azụlitewo ihe karịrị 100 infographics na, site na, a atụmatụ dị ike nke ahụ na-aga n'ihu na-aga nke ọma maka ndị ahịa ọ bụla anyị mebere ha maka. Anyị na-eme ha maka ọtụtụ ụlọ ọrụ yana ịgbatị onyinye ha nye ndị ahịa ha.
Ulo oru ndi na edeputa #infographics nwere 12% onu ahia kariri. Dị ka otu ọmụmụ si Graphs.net
Infographics nwere uru gafere ọtụtụ usoro atụmatụ:
Nkọwa - ọ bụrụ na emebere ya ma gbuo ya nke ọma, infographics na-enye ozi na usoro nke na-eri ngwa ngwa.
Ọrịa - n'ihi na ọ bụ naanị nnukwu onyonyo, a na-edepụtagharị ihe ọmụma na-ekekọrịta ngwa ngwa na webụ.
search - mgbe a na-akọrọ ha, ha na-ewepụta ntụnye nkenke dị mkpa na onye okike, na-abawanye ikike ikike ngalaba ha na njikwa ọchụchọ.
Mkpakọrịta na nnukwu ụlọ ọrụ ihe ọmụma dị mkpa bụ ihe kacha mkpa maka ịga nke ọma gị. Ihe omuma ihe eji eme ihe nke oma choro nyocha, mmepe akuko, imewe, ikpo oku na nkwalite iji mezuo ikike ya. Ihe omuma nke emechara nke oma nwere ike inye onwa ma obu obula otutu uzo di nkpa na saiti gi.
Jide n'aka na ụlọ ọrụ ahụ nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ gị. Anyị lekwasịrị anya na nkà na ụzụ ma ọ bụ ịzụ ahịa ahịa gbadoro ụkwụ. Anyị nwere uru dabara nke ọma na anyị ga-egosipụta ha ebe a na Blog Tech Tech iji gbasaa iru ha.
Nye ihe omuma ihe omuma taa!
Ejila okwu anyị maka ya, ndị ọkachamara infographic na Neoman haziri ma mepụta ihe omuma a na ihe kpatara ha ji arụ ọrụ nke ọma. Neoman na-emepụta ihe omuma ihe mara mma - hụ na ị ga-enyocha ha Pọtụfoliyo na pịa site na nke a infographic n'okpuru ka lee mmekorita nke mmekorita:
Tags: ụlọ ọrụ infographicinfographic imeweIhe omuma ihe omumaInfographics Ahịaneomanịtụ infographics
DesignCrowd: Crowdsource Graphic Designs si 485,000 + Ndị ọkachamara